Fizarana ny Finoana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2016-01 mpandimby ny Magazine > Mizara ny finoana
Betsaka ny olona amin'izao fotoana izao no tsy mila mitady an'Andriamanitra. Tsy mahatsapa ianao hoe nanao zavatra tsy nety, mainka ve fa nanota. Tsy fantatr'izy ireo ny atao hoe meloka na Andriamanitra. Tsy atokisany ny governemanta na ny foto-kevitry ny fahamarinana izay matetika nampiasaina hanakanana ny olon-kafa. Ahoana no ahafahana mamoaka ny vaovao tsara momba an'i Jesosy amin'ny fomba izay misy dikany amin'ireo olona ireo? Ity lahatsoratra ity dia manazava ny filazantsara amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny fifandraisan'olombelona - izay mbola asongadin'ny olona.
Mamono sy manasitrana fifandraisana tapaka
Ny olana goavana atrehan'ny fiarahamonina tandrefana dia ny fifandraisana tapaka: ny fisakaizana izay lasa fifandrafiana, fampanantenana tsy tanterahina ary fanantenana izay nivadika fahadisoam-panantenana. Betsaka amintsika no nahita ny fisaraham-panambadiana na zaza na olon-dehibe. Efa niaina ny fanaintainana sy ny korontana vokatry ny tontolo tsy azo antoka izahay. Nianarantsika fa ny olona manam-pahefana dia tsy azo atokisana ary ny olona manao zavatra mifanaraka amin'ny tombotsoany avy hatrany. Betsaka amintsika no mahatsiaro very ao amin'ny tontolo hafahafa. Tsy fantatsika hoe avy aiza isika, avy aiza ary aiza no alehantsika na hoe iza isika. Miezaka mafy araka izay tratra izahay hamakivaky ireo olana amin'ny fiainana, hamakivaky ny toeram-pitrandrahana ara-panahy, angamba aza manandrana tsy mampiseho ny fanaintainana tsapantsika ary tsy mahalala akory hoe mendrika izany.
Mahatsiaro ho irery tsy manam-petra isika satria toa mila mikarakara ny tenantsika. Tsy te-hanolo-tena amin'ny zavatra rehetra izahay ary toa tsy dia manampy be koa ny fivavahana. Ny olona manana fahatakarana ara-pivavahana diso lalana dia mety ho ireo izay manapoaka olona tsy manan-tsiny - satria izy ireo dia eo amin'ny toerana tsy izy amin'ny fotoana tsy mety - ary milaza fa Andriamanitra no mampijaly azy ireo satria tezitra amin'izy ireo Izy. Manambany olona tsy mitovy amin'izy ireo izy ireo. Tsy misy dikany ny fahalalanao an'Andriamanitra, satria tsy mitovy ny tsara sy ny ratsy, ny fahotana dia hevitra efa taloha, ary ny fahatsapana ho meloka dia fihinana ho an'ny mpitsabo fotsiny. Toa tsy misy dikany i Jesosy. Matetika ny olona dia manatsoaka fehin-kevitra diso momba an'i Jesosy satria mino izy fa niaina fiainana tsy nisy tomika izy izay nanasitranana olona iray monja tamin'ny fikasihan-tanana, nanao mofo tsy misy dikany, nandeha teny ambonin'ny rano, voahodidin'ny anjely mpiambina, ary nanao majika tamin'ny herin'ny maizina. afa-nandositra. Saingy tsy misy dikany izany eo amin'ny tontolo ankehitriny. Na dia nohomboana tamin'ny hazo fijaliana aza i Jesosy dia toa nesorina tamin'ny olan'ny fotoanantsika ankehitriny. Vaovao tsara ho azy manokana ny fitsanganany tamin'ny maty, fa maninona aho no hino fa vaovao tsara ho ahy koa io?
Jesosy dia niaina ary niaina izao tontolo izao
Ny fanaintainana izay tsapantsika eo amin'ny tontolontsika, izay hafahafa amintsika, dia ilay fanaintainana izay fantatr'i Jesosy mihitsy tamin'ny zavatra niainany. Namadika azy ny namany, ary nanararaotra sy nandratra ny tompon'andraikitra ao amin'ny firenena. Nanoroka azy ny oroka avy amin'ny mpiara-miasa akaiky aminy. Fantatr'i Jesosy ny dikan'izany rehefa miarahaba azy fatratra ny olona indray andro any ary miarahaba azy amin'ny boo sy fanararaotana. I John the Baptist, zanak'olo-mpianadahy amin'i Jesosy, dia novonoin'ny mpitondra notendren'ny Romana satria naneho ny fahalemeny ara-pitondrantena. Fantatr'i Jesosy fa hovonoina koa izy raha manontany tena momba ny fotopampianarana sy ny toeran'ny mpitondra fivavahana jiosy. Fantatr'i Jesosy fa hankahala azy tsy misy antony ny olona, ​​hiodina ny namany ary hamadika azy ary hovonoin'ny miaramila izy. Nahasoa antsika izy na dia fantany mialoha aza fa isika olombelona dia mety hanaintaina ara-batana azy ary hamono azy mihitsy aza. Izy no olona tsy mivadika amintsika, na dia mankahala antsika aza isika. Tena sakaiza izy ary mifanohitra amin'ny mpamitaka. Toy ny olona latsaka tao anaty rano mangatsiaka mangatsiaka isika. Tsy afaka milomano isika ary i Jesosy no mitsambikina any amin'ny farany lalina hamonjy antsika. Fantany fa hanandrana izay rehetra azo atao isika, saingy tsy afaka mamonjy ny tenantsika isika ary ho faty raha tsy miditra an-tsehatra. Tonga tsy tia tena teto amin'izao tontolo izao Jesosy ary fantany tsara fa hankahalaina sy hovonoina izy. Jesosy dia nanao izany ho antsika an-tsitrapo haneho antsika fomba tsara kokoa. Izy no olona azontsika itokisana. Raha vonona hanome ny ainy ho antsika izy, na dia fahavalontsika aza no fahitantsika azy, tsy mainka ve isika hatoky azy raha mahita azy ho namana isika?
Ny fomba fiainantsika
Jesosy dia afaka milaza amintsika zavatra momba ny fiainana. Momba ny toerana niavianay, ny alehantsika ary ny fomba ahatongavantsika any. Izy dia afaka milaza amintsika ny amin'ny loza ateraky ny sehatry ny harena ankibon'ny tany antsoina hoe fiainana. Afaka matoky azy isika ary mahita fa mendrika izany. Rehefa manao an'io isika dia tsy maintsy mahita ny fitomboan'ny fahatokisantsika. Amin'ny farany, marina foana izy.
Raha ny mahazatra dia tsy mila namana izay marina foana isika satria manelingelina. Jesosy, Zanak'Andriamanitra, tsy ilay karazan'olona miteny hoe "Efa nolazaiko taminareo izany avy hatrany!". Mitsambikina ao anaty rano izy, manalavitra ny fanandramantsika hamely antsika, manondrika antsika amin'ny banky ary mamela antsika hisento. Mitohy isika, manao zavatra tsy mety indray ary latsaka ao anaty rano indray. Amin'ny farany dia hanontany azy isika hoe aiza ny faritra mampidi-doza amin'ny diantsika mba tsy hampidi-doza ny tenantsika. Saingy afaka mahazo antoka koa isika fa tsy mila azy ny famonjena antsika, fa raharaha akaiky ny fony.
Mahari-po amintsika Jesosy. Ataony manao fahadisoana isika ary mahatonga antsika hiaritra ny vokatr'izany hadisoana izany aza. Avelany hianatra avy amin'izany isika, fa tsy hamela antsika tsy handiso fanantenana velively. Mety tsy azontsika antoka akory fa misy izy, saingy afaka matoky isika fa ny faharetany sy ny famelany heloka dia lehibe kokoa ary tsara kokoa ho an'ny fifandraisantsika noho ny fahatezerana sy ny fialana. Fantatr'i Jesosy ny fisalasalantsika sy ny tsy fahatokisantsika. Fantany ny antony mahatonga antsika tsy hanaiky intsony satria naratra koa izy.
Ny antony mahari-po indrindra dia satria tiany ho hitantsika izy ary hanaiky ny fanasana manokana azy amin'ny fankalazana mahafinaritra mahafinaritra. Jesosy dia miresaka fifaliana feno hafaliana, fifandraisana tena izy sy maharitra ary maharitra. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana toy izany aminy sy amin'ny hafa, dia fantatsika hoe iza marina isika. Noforonina noho ireo fifandraisana ireo isika, izany no antony itiavantsika azy ireo mafy. Izany indrindra no nomen'i Jesosy antsika.
Torohevitra avy amin'Andriamanitra
Ny fiainana miandry dia mendrika hiainana. Izany no antony naneken'i Jesosy an-tsitrapo ny fanaintainan'ity tontolo ity ary nanondro fiainana tsara kokoa miandry antsika isika. Toy ny mandeha an-tany foana tsy mahalala izay alehantsika isika. Jesosy dia nandao ny filaminan'ny paradisa sy ny fiadanany ary niatrika ny tafio-drivotra eto an-tany izy ary nilaza tamintsika hoe: misy fiainana izay ahafahantsika mandray ny zava-drehetra mahafinaritra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mila mandeha miaraka aminy fotsiny isika. Afaka mamaly an'ity fanasana ity isika amin'ny alàlan'ny «Misaotra, fa manandrana ny vintako any an'efitra» na afaka mandray ny toroheviny isika. Jesosy koa dia milaza amintsika ny toerana misy antsika ankehitriny. Tsy mbola ao amin'ny paradisa isika. Maharary ny fiainana. Fantantsika izany ary fantany koa izany. Izy tenany mihitsy no niaina izany. Noho izany dia tiany koa ny manampy antsika hiala amin'ity tontolo mamoy fo ity ary mamela antsika hanana fiainana be dia be, izay nomaniny ho antsika hatramin'ny voalohany.
Nilaza tamintsika i Jesosy fa misy loza ateraky ny fifandraisana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny fatoram-pianakaviana sy ny finamanana dia mety ho fifandraisana tsara sy mahafinaritra indrindra amin'ny fiainantsika raha miasa izy ireo. Saingy tsy manao izany foana izy ireo ary avy eo dia miteraka fanaintainana lehibe indrindra. Misy fomba izay miteraka fanaintainana ary misy fomba izay mahatonga fifaliana. Mampalahelo fa ny olona indraindray mitady fomba izay mitarika amin'ny fifaliana izay miteraka fanaintainana amin'ny olon-kafa. Indraindray rehefa manandrana misoroka fanaintainana isika dia miala amin'ny fahafinaretana koa. Izany no antony ilantsika fitarihana azo antoka rehefa mivezivezy any an'efitra isika. Jesosy dia afaka mitarika antsika amin'ny lalana marina. Amin'ny fanarahana azy dia tonga amin'ny toerana misy azy isika.
Ilay Mpamorona Andriamanitra dia maniry fifandraisana amintsika, fisakaizana iray izay mampiavaka ny fitiavana sy ny fifaliana. Voatahiry sy matahotra isika, namadika ny Mpamorona, miafina ary tsy te-hanokatra ireo taratasy alefany amintsika. Izany no antony nahatongavan'Andriamanitra ho tonga olombelona Jesosy. Tonga teto amin'izao tontolo izao Izy mba hilaza amintsika tsy hatahotra. Namela ny helony isika, nomeny zavatra tsara kokoa noho izay efa nananantsika isika ary tiany hiverina any an-trano isika izay milamina sy mahazo aina. Novonoina ny iraka, saingy ny hafatra dia mijanona ho tsy miova. Mbola manolotra finamanana sy famelan-keloka ho antsika Jesosy. Miaina Izy ary manolotra antsika tsy hanoro antsika ny lalana fotsiny, fa hiara-dia amintsika ary hamonjy antsika amin'ny rano mangatsiaka. Mandehandeha miaraka amintsika mandritra ny matevina sy manify isika. Maharitra amin'ny famonjena antsika sy ny faharetana mandra-pahatongan'ny fotoana Izy. Afaka miantehitra aminy isika, na dia diso fanantenana antsika aza ny olon-drehetra.
Vaovao tsara ho antsika
Miaraka amin'ny namana toa an'i Jesosy dia tsy mila matahotra ny fahavalontsika intsony isika. Tsara ny fananana namana izay ambony noho ny olon-drehetra. Jesosy no namana. Milaza izy fa manana ny fahefana rehetra eo amin'izao rehetra izao. Nampanantena antsika izy hampiasa io hery io ho antsika. Manasa antsika amin'ny fankalazana azy any amin'ny paradisa i Jesosy. Niezaka mafy izy nitondra izany fanasana izany tamintsika. Novonoina mihitsy aza noho izany, saingy tsy nahasakana azy tsy ho tia antsika izany. Na izany aza, manasa ny rehetra hanatrika io fankalazana io izy. Manao ahoana ianao? Angamba tsy dia mino ianao hoe misy olona tsy mivadika tokoa na mety ho tsara mandrakizay ny fiainana. Tsy maninona izany - fantany fa ny zavatra niainanao dia nahatonga anao tsy hanana ahiahy amin'ny fanambarana toy izany. Mino tanteraka aho fa afaka matoky an'i Jesosy ianao. Aza raisina fotsiny ny teniko fa andramo ho anao. Midira amin'ny sambony. Mieritreritra aho fa te-hijanona ao anatiny ianao. Hanomboka hanasa olon-kafa hanatevin-daharana ianao. Ny zavatra tokana tsy maintsy very anao dia ny fahaverezanao.